नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलनमा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गर्नुभएको सम्वोधन, २०७६ पुस १९ गते । - MadhavNepal.com
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलनमा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गर्नुभएको सम्वोधन, २०७६ पुस १९ गते ।
नेपाल भ्रमण बर्षका अवसरमा वेदकोट नगरपालिकाद्वारा स्थानीय तहका नगरपालिका र गाउँपालिकासँग अन्तर्सम्वाद सञ्चालन गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भावनाका बारेमा छलफल गर्ने उद्धेश्यले आयोजित यस कार्यक्रमका सभापति वेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक चन्द ज्यु, मञ्चमा आसिन प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री लगायत प्रदेशसभाका सांसद र यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि साथीहरु, उपस्थित आदरणीय महानुभावहरु ।
मलाई खुसी लागेको छ, तपाईहरुका सुन्दर गित र नृत्यहरुले, आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्युको गित र छन्दहरुले भरिएको भाषणले तपाईहरुको भावनालाई गदगद बनाएको छ । विभिन्न वक्ताहरुको माध्यमबाट हामिले सुन्यौ, यो सुदुरपश्चिम प्रदेश कति रमणीय छ, कति सुन्दर छ । अहिले हामी पर्यटन वर्षका बारेमा छलफल चलाइरहेका छौं । समय समयमा हामीले पर्यटन प्रवर्द्धनका बारेमा छलफल गर्ने गर्दछौं । जतिवेला म प्रधानमन्त्री थिएँ, तपाईहरुलाई थाहा छ, भ्रमण बर्ष २०११ मनाएका थियौं ।
अहिले हामी भिजिट नेपाल २०२० मनाउन गइरहेका छौं । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि हामी सवै लाग्नुपर्नेछ । यसको महत्वको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्दछ । पर्यटकहरुलाई हामी कसरी आकर्षित गर्न सक्दछौं भन्नेबारेमा पनि हामीले जानकारी राख्नुपर्दछ । हामीसँग के छ त्यस्ता चिजहरु, जसप्रति हामी गौरववोध गर्न सक्दछौं । अरु मानिसकाबीचमा त्यो कुरा प्रचार गर्न सक्दछौं । स्वदेशी र विदेशीहरुकाबीचमा त्यो कुरालाई व्यापक रुपमा लैजान सक्दछौं । पर्यटन प्रवर्द्धनका बारेमा चर्चा गर्दा, २० लाख पर्यटन ल्याउने कुरा गरिरहेका छौं । त्यो आन्तरिक पर्यटक होइन, विदेशी पर्यटकहरुलाई हामीले निम्त्याउन चाहेका छौं । विदेशी मुद्रा नेपालमा ल्याउन, नेपालको प्रचार गर्न सकौं र भविष्यमा २ करोड पर्यटक पनि भित्र्याउन सकौं भनेर यो अभियान सुरु गरिएको हो ।
संसारका केही देशहरु पर्यटनमा मात्रै पनि आश्रित छन् । दक्षिण एसियाकै माल्दिभ्समा राज्यको आम्दानीको मुख्य श्रोत भनेकै पर्यटन हो । त्यहाँ ७० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत नै पर्यटन छ । हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने, पर्यटनबाट आम्दानी त्यो तहमा पुगिसकेको छैन । हामी सँग सँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा लागेका देशहरुले नेपाललाई धेरै उछिनिसकेका छन् । कम्वोडियामा केही बर्षअघि १० हजारको संख्यामा रहेको पर्यटन आगमन अहिले ८० लाख पुगिसकेको छ । कम्वोडियाको जनसंख्या पनि त्यहि सेरोफेरोको छ । हरेक वर्ष त्यो देशको जनसंख्या जति नै पर्यटकहरु त्यहाँ घुम्न जान्छन् । के भन्ने गरिन्छ भने, एक जना राम्रो पर्यटक आयो भने ३ जनाको जीवन संचालन गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशको जनसंख्या तीन करोड छ । एक करोड पर्यटक आउने हो भने, तीन करोड मानिसलाई जीवनयापन गर्न गाह्रो हुँदैन । नेपालको सम्भावनालाई हेर्ने हो भने, विशाल सम्भावना छ । सरकारको कुरा गर्ने हो भने, सवै तहका सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर पर्यटकलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा गहिरो अनुसन्धान भएको छैन । पर्यटकका राय सुझाव सुनेर, कमजोरीहरु खोजेर, त्यसलाई सुधार्न लाग्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने, कृषि नै यसको आधारशिलाको रुपमा रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको जग भनेको कृषि नै हो । तर कृषिसँग अन्य चिजहरु पनि जोडिएको छ । कृषि उत्पादन माला पर्यटकहरुलाई स्वागत गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । फलफुलहरु बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ । कृषि उत्पादनहरुले होटलहरु संचालन गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य उद्योगहरु, दुग्ध होस्, मासु होस्, माछा होस् । त्यसैले कृषिको महत्वलाई कम ठान्नु हुँदैन । तर अहिले कृषिले मात्रै मानिसको जीवन आनन्दले धान्न पुग्दैन । अव कृषिको आधुनिकिरण, यान्त्रिकरण र व्यवसायिकरण गर्नुपर्दछ ।
अहिले अरु क्षेत्रको पनि धेरै महत्व छ, बाटोघाटो बनाउनु पर्नेछ । सडक सञ्जालको विकास गर्नुपर्नेछ । विमानस्थलहरुको विकास गर्नुपर्नेछ । रेलमार्गको विकास गर्नुपर्नेछ । थ्री वेको विकास गर्नुपर्दछ । हाइवे, रेलवे, एयरवेको बिकास गर्नुपर्नेछ । यसअर्थमा हामीले भौतिक पुर्वाधारको विकासलाई महत्व दिइरहेका छौं । दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । संसारका कतिपय देशमा हेर्नुस्, भौतिक पुर्वाधार तयार भइसक्यो । वाटो, रेलवेको कमि छैन । विमानस्थलको कमि छैन । त्यहाँ धेरै जनशक्ती खपत हुन सक्दैन । मर्मत गरेर काम चल्छ, तर हामीकहाँ केही दसकसम्म भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि जनशक्ती चाहिएको छ । त्यो पनि नेपालको अर्थतन्त्रको लागि महत्वपुर्ण छ ।
हामीले जलविद्युत विकासको योजना अघि बढाइरहेका छौं । जलविद्युत उत्पादन क्षमतामा नेपाल महत्वपुर्ण देश हो । तीनवटा ठुला नदिहरु छन् । कर्णालीसँग जोडिएको महाकाली, नारायणी र कोशी, जुन हाम्रो हिमश्रृंखलाबाट बगेर भारतको गंगामा जोडिंदै समुन्द्रमा पुग्छन् । यी नदिहरुबाट प्रसस्त विजुली निकाल्न सक्ने सम्भावना छ । विजुली वेचेर नेपाललाई धनी बनाउन सक्ने सम्भावना छ । गाउँ घर सवै झिलिमिली बनाउन सकिन्छ । उद्योगधन्दा र कलकारखाना चलाउन सकिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसरी हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा कृषि आधारशिलाको हो भने जलविद्युत र पर्यटन मेरुदण्ड हो ।
मेरुदण्डको रुपमा रहेको जलविद्युतको अनन्त सम्भावना हुँदैन तर पर्यटनको अनन्त सम्भावना छ । यी सवै सन्दर्भमा हामीलाई योग्य मानिस चाहिन्छ । यसअर्थमा शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ हाम्रो देशमा रहेका खानीहरुको अन्वेषण र प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने पनि नेपाल धनी राष्ट्र बन्न सक्छ । नेपालीहरुले हामी गरिव छौं भनेर टाउकोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालको धर्तिबाट अभाव र गरिवीलाई अन्त्य गर्ने अठोट गर्न हामी जुर्मुराएर उठ्नुपर्छ । एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालको विकासका जे जति सम्भावना छन् ति सवैलाई उपयोग गर्नुपर्छ । तर यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रो देश किन हामीले चाहेजस्तो विकास हुन सकिरहेको छैन ? यसबारे हामीले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । विचार मन्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालीहरुको इतिहास निकै पुरानो छ । झण्डै ५ हजार वर्षको इतिहास भएको हाम्रो देश नेपालले कहिलै पनि विदेशीसामु घुँडा टेक्नु परेको छैन । दासता स्वीकार गर्नु परेको छैन । अरुको उपनिवेश हुनु परेको छैन । यसमा हामी नेपालीले गौरववोध गर्नुपर्दछ । हाम्रा दुई विशाल छिमेकी देश छन् । हामी दुवैसँग राम्रो सम्वन्ध राख्न चाहन्छौं । दुवैको विकासबाट लाभ लिन चाहन्छौं । दुवै देशमा रहेको विशाल जनसंख्यालाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्ने हो भने पर्यटकको कुनै कमि हुने छैन । युरोप र अमेरिकाबाट मात्र होइन, चीन र भारतबाट मात्रै (१ अर्व ३० करोड जनसंख्या भएको भारत र १ अर्व ६० करोड जनसंख्या भएको चीन) ठुलो संख्यामा पर्यटक नेपाल आउन सक्छन् । यसैले हामी दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं ।
महाकाली नदिको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा हामीले २५ औं परियोजनालाई अघि बढाउने कुरा गर्यौं । महाकाली नदि साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने मान्यतालाई अघि सार्यौं । महाकाली नदिलाई सिमा नदिका रुपमा दुवै देशले स्वीकार गर्यौं । अहिले भारतको नक्सा प्रकाशित भइसकेपछी केही विवाद उत्पन्न भएको छ । तर यो समस्या समाधान गर्न भारतले वार्ताका लागि तयार भएको बताएको छ । अव वार्ता हुनेछ र तथ्य र प्रमाणका आधारमा यी सवै कुराको छिनोफानो हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु ।
हामी कसैसँग पनि शत्रुता चाँहदैनौं । चाहे भारत होस् वा अमेरिका । हामी कुनै देशसँग पनि टाँसिन चाहँदैनौं । हाम्रो लागि सवै देशहरु मित्र नै हुन्छन् । हामीलाई शत्रुता बढाउनु छैन । सवैसँग मिलेर अघि बढ्न चाहन्छौं किनभने नेपालको संस्कार नै वसुधैव कुटुम्वकम् हो । नेपाल विश्वभरका मानिससँग सौहार्दपुर्ण सम्वन्ध राख्न चाहन्छ । गौतम वुद्ध जन्मेको भुमि यहि नेपाल हो । वुद्धले बिश्व शान्तीको सन्देश यहि भुमिबाट संसारमा छर्नुभएको छ । त्यस्तो देशका हामी बासिन्दाहरुले सवैसँग मिठो सम्वन्ध राख्न चाहन्छौं ।
तर हामी आफ्नो स्वाभिमानप्रति, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप प्रति निकै संवेदनशील पनि छौं । यसअर्थमा अहिले उठिरहेका प्रश्नहरु, चाहे कालापानी भुभागको प्रश्न होस् चाहे एमसीसीसँग जोडिएको प्रश्न होस् । यी बिषयमा हामी यहि मान्यताका आधारमा, कसैका विरुद्ध लक्षित हुने कुरामा हामी लाग्दैनौं । कसैसँग शत्रुता मोल्न चाहंदैनौं । नेपालको सम्मान सवैले गरुन् । आन्तरिक मामलामा कसैले हस्तक्षेप नगरुन् भन्ने हामी चाहन्छौं । कहिंकतै कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सुधारौं । कुराहरु प्रष्ट पार्न सकिएको छैन भने, गलत समाचार सम्प्रेषण भएको छ भने प्रष्ट पारौं । नेपाली स्वाभिमानी भावनालाई सवैले बुझिदिन पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
धेरै लामो समयदेखि देस विकासका लागि हामीले पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनाहरु अघि सारेका छौं । विभिन्न सरकारले विभिन्न योजनाहरु अघि सारेका छन् । मैले सम्झिरहेको छु, प्रधानमन्त्री हुँदा मैले सुदुरपश्चिमको विकासका लागि महत्वपुर्ण परियोजनाहरु अघि सारेको थिएँ । तपाईहरुले सम्झनुपर्छ, विर्सन हुँदैन । सुदुरपश्चिममा विश्वविद्यालयको स्थापना र मेडिकल कलेजको स्थापना मेरै पालामा भएको थियो । महाकालीको सन्दर्भमा, नदि साझा हो, पानी आधा-आधा हो भनेर संसदमा कुरा उठाउने हामी नै थियौं । त्यतिवेला प्रेमसिंह धामी, उर्वादत्त पन्त लगायत नेताहरुले महाकाली नदिको सन्दर्भमा धेरै अध्ययन गरेर भन्नुभयो- महाकाली सिमा नदि भएकोले यसको किनारा लगाउन भारतले छिटो भन्दा छिटो सिमा समस्यालाई टुङ्गो लगाओस् । त्यतिवेला हामीले पत्राचार पनि गरेका थियौं । भारतका प्रधानमन्त्रीसँग हामीले कुरा पनि गरेका थियौं । हामीले पठाएका पत्रहरु छापेर कितावका रुपमा पनि राखेका छौं । यसअर्थमा हामी तथ्यका आधारमा अगाडी बढ्न चाहन्छौं । सवैको लाभको निम्ती अघि बढ्न चाहन्छौं । कसैको विरुद्धमा नेपालको भुमि प्रयोग नहोस् भन्ने कुरामा पनि हामी निकै सम्वेदनशील छौं ।
लामो समयदेखि हामीले उठाउँदै आएको कुरा के हो भने- पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाऔं । त्यहाँबाट उत्पादित विजुली आधा नेपालको हक लाग्छ, आधा भारतको हक लाग्छ, दुवैले उपयोग गरौं । सम्भावना ७ हजार मेगावाट भनिएको थियो, ६ हजार मात्रै उत्पादन भयो भने पनि ३ हजार नेपालको हक लाग्छ ३ हजार भारतको हक लाग्छ । त्यो काम अहिलेसम्म अघि नबढ्दा हामीलाई खल्लो महसुस भएको छ । त्यो ढिलाईलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्छ । यहि पानीको उपयोगको सन्दर्भमा नेपालको भुमि सिंचित हुने कुरामा पनि बञ्चित नहोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।
यहि क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा, महाकाली करिडोर, सेती राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग पनि हाम्रै पालामा अघि सारिएको हो । मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको क्रममा बन्ने १० वटा ठुला शहरहरु मध्ये २ ठुला शहरहरु, एउटा वैतडीको पाटनमा र अर्को अछामको साँफेमा निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको थियो । अव विकासका काम अघि बढाउने जिम्मा तपाईहरुको काँधमा आएको छ । यहाँका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीज्युहरु, प्रदेशसभाका सदस्यहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यहाँको विकासका लागि केन्द्रबाट पाउनुपर्ने र तपाईहरुले दिनुपर्ने ध्यान पनि पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
मलाई खुसी लागेको छ, राम्रो काम गर्ने नगरपालिकाहरु मध्ये (धेरै मैले हेर्न पाएको छैन) वेदकोट नगरपालिका पनि परेको छ । प्रमुख अशोक चन्दजीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो भन्दा, हामीलाई त भनेको होइन भनेर तपाईहरुको मनमा चस्स पर्यो होला । जसले वदमासी गर्यो, उसलाई पो डर लाग्छ । जसले वदमासी गरेको छैन, उसको शीर ठाडो हुन्छ । त्यसैले नविराउनुहोस्, डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
यहाँको विकासका लागि वेग्लै योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । शिवलिंगेश्वरको भ्रमण गर्ने क्रममा पनि मैले भनेको थिएँ, त्यहाँ यस्तो तीर्थस्थल बनाउनुहोस्, मेची देखि महाकालीसम्मका शिवालयमा शिव भगवानका जति पनि रुपहरु छन् ती सवैलाई त्यहाँ स्थापित गरिदिनुहोस् । शिवका सवै स्वरुपहरु राख्नुभयो भने त्यो हेर्न मेची देखि महाकालीसम्मका मानिसहरु मात्र होइन, भारतका हिन्दु धर्मावलम्वीहरु र संसारभरका हिन्दु धर्मावलम्वीहरुलाई पनि आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ ।
अत्तरियादेखि गड्डाचौकीसम्मको सडकलाई सकिन्छ भने आठ लेन, होइन भने छ लेन बनाउने योजनालाई पनि तपाईहरुले पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस् । संघीय सरकारले पनि यसमा ध्यान देओस् भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु । मेचीदेखि महाकालीसम्म निर्माण भएको राजमार्गलाई ६ लेन र ८ लेनमा विकास गर्ने काम विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेको छ । त्यसपछी छोटो समयमा हामी महाकालीबाट मेची पुग्न सक्नेछौं । रेलमार्गको विकास पनि धमाधम भइरहेको छ, आगामी ५ देखि १० बर्षभित्र पुरा हुँदैछ । ४२ महिनामा टर्कीको स्तानवुल विमानस्थल बनेको थियो । १ हजार किलोमिटर बाटो उत्तर कोरियाले १ बर्षमा निर्माण गरेको छ । हाम्रो काममा कहाँ छ त्रुटी ? खोज्नुपर्दछ । सवै कुराहरु गर्न सम्भव छ । हामी अव विकासको काममा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
सुदुरपश्चिममा विकासको विशाल सम्भावना छ । चाँदनी दोधारामा सुख्खा बन्दरगाहको वेग्लै सम्भावना छ । महाकाली सिंचाइको तेस्रो चरणको योजना पनि अघि बढ्ने क्रममा छ । गौरीफन्टादेखि मानसरोवरसम्म सडक निर्माणको पनि सम्भावना छ । पश्चिम सेतीको हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लामो समयदेखि अलपत्र छ । अपर कर्णाली लामो समय रोकिएको थियो अव अघि बढ्ने क्रममा छ । कृषि विकासको सन्दर्भमा उँखुको सुपरजोन निर्माणमा सरकारले किन ध्यान दिएन भनेर पनि तपाईहरुले कुरा उठाउनुभएको छ । सुदुरपश्चिमका खप्तड, मालिका सहित कयौं ठाउँहरु पर्यटकीय महत्वका छन् ।
नेपालको विशेषता के छ भने, यो विविधताले भरिएको त छ नै, दुईवटा धर्मको उद्गमस्थल पनि हो । हिन्दु धर्मको उद्गास्थल पनि यहि नेपाल हो भने वुद्ध धर्मको उद्गमस्थल पनि यहि देश नेपाल हो । एक अर्वको संख्यामा रहेका हिन्दुहरुलाई आकर्षित गर्न धार्मिक स्थलहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ । लुम्विनी मात्र होइन, कपिलवस्तु र नवलपरासीसम्म वुद्ध सर्किटले जोड्न सक्ने हो भने ८० करोड देखि १ अर्व वुद्धिष्टहरुको गन्तव्य स्थल नेपाल हुन सक्छ । तपाईहरुको यस क्षेत्रको पनि छुट्टै विशेषता छ । सिंगो देश विकासको पनि थुप्रै सम्‍भावना छन् । हरेक प्रदेशका आफ्नै सम्भावना छन् । हिजोमात्र चिनियाँ टोलीसँग मैले भनेको थिएँ, तपाईहरु शुक्लाफाँटा जानुभएन र चितवनको मात्रै भ्रमण गर्नुभयो भने भ्रमण अधुरो रहन्छ । चितवन पनि घुम्नुस् । कोशी टप्पु पनि घुम्नुस् । बर्दिया निकुञ्ज पनि घुम्नुस् । शुक्लाफाँटा पनि जानुस् । फेवा ताल पनि हेर्नुस् । रारा पनि जानुस् ।
यो क्षेत्र आफैमा पनि प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्यले भरिएको छ । यसलाई थप सुन्दर कसरी बनाउने ? सुन्दर बनाउने नाममा बन विनास नहोस् भन्नेमा पनि ख्याल गर्नुस् । रुख काट्नै परेको छ भने खाली ठाउँमा ५-१० गुणा धेरै विरुवा रोपेर क्षतिपुर्ती गर्ने काम पनि गर्नुस् । रुख हुर्किने सुनिश्चितता पनि गर्नुस् । प्राकृतिक सुन्दरतालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस् । अव डाँडाकाँडामा बस्ति बसाउने होइन, डाँडाकाँडामा हरियाली सुनिश्चित गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुस् । त्यसो गर्न सके शुक्लाफाँटा मात्र होइन, धेरै हिसावले यो ठाउँ सुन्दर प्राकृतिक स्थलका रुपमा संसारमा चिनिनेछ । हाम्रो देश प्राकृतिक हिसावले सुन्दर त छ नै प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनी पनि छ । नदीनालाका हिसावले पनि धनी छ । यसअर्थमा यो देशलाई अघि बढाउन हामी सवै लाग्नुपर्ने खाँचो छ । देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन सरकारले संकल्प गरेको छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दिएको छ । यो नारालाई साकार पार्नका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के के होलान् ? शिक्षित र अनुशासित नागरिक बनाउनुपर्ने, मेहेनेती मानिसहरु तयार गर्नुपर्न, देशभक्तीको भावना जगाउनुपर्ने, देश विकासका लागि प्रतिवद्ध मानिसहरु तयार गर्नुपर्ने, योग्यता र क्षमताको कदर गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
हालै भएको साग खेलमा उपाधी जित्ने यहि क्षेत्रका दुईजना नानीहरुलाई हामीले यहाँ सम्मान गर्यौं । म बधाइ दिन चाहन्छु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु । समाजको जुनसुकै क्षेत्रमा अघि बढ्नेहरुलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल सवै जातजातीको साझा फुलवारी हो । कुनै पनि जातजातीप्रति हामीले भेदभाव गर्नु हुँदैन । हाम्रो देशमा १२६ वटा जातजाती छन् । १२३ वटा भाषाभाषी छन् । हामी ति सवैको सम्मान गर्न चाहन्छौं । सातै प्रदेशलाई अघि बढाउन चाहन्छौं । विभिन्न ऐतिहासिक कारणले पछी परेको यो सुदुरपश्चिमलाई पनि हामीले विकासको मुल प्रवाहमा समाहित गरेर लैजान चाहन्छौं । तपाईहरु पनि यो राष्ट्रिय अभियानमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नुहोस् । जसरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भिजिट नेपाल २०२० सँग जोडेर, सवै गाउँ र नगरपालिकामा पनि यहि सन्देश प्रवाह गर्ने उद्धेश्यले र सवैलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्धेश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छ भन्ने मैले ठानेको छु । एउटा कुरा ख्याल गर्नुस्- सडक निर्माणलाई तपाईहरुले प्राथमिकता दिनुभएको छ, खाल्डाखुल्डी मुक्त बाटो बनाउनुहोस् । पिच बाटोमा खाल्डा नहोस् भन्ने कुरामा सुनिश्चिता गर्नुस् । मैले आफ्नो क्षेत्र काठमाडौं २ मा भन्ने गरेको छु- नगरपालिकाका मेयर र वडा अध्यक्षलाई, आफ्नो कार्यकालभित्र नगरक्षेत्रका सवै सडक पिच होस् । ति सवै बाटो पिच गर्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ । तपाईहरु पनि बाटो घाटो बनाउने कुरामा, पिउने पानीको प्रवन्ध गर्ने कुरामा, वृक्षारोपण र खुला पार्क निर्माण गर्ने कुरामा, सीप विकास गर्ने कुरामा, घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कुरामा विशेष रुपमा ध्यान दिनुहोस् ।
भ्रष्टाचार नगर्नुहोस् । अहिले लोभ गर्नुभयो भने, लाभ त होला तर पछी विलाप सुरु हुन्छ । एउटा भनाइ नै छ- लोभले लाभ, लाभले विलाप । नाम कमाउनुहोस् । नाम चम्काउनुहोस् । सवैले तपाईको जय जय गरुन् । इतिहासले तपाईको प्रशंसा गरोस् । इतिहासले तपाईलाई नविर्सिने मात्र होइन, जनताले पनि विर्संदैनन् । पार्टीले पनि बिर्सिंदैन । सवै जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस् । आफ्नो वस्तीलाई सुन्दर बनाउनका लागि, सफा बनाउनका लागि, मनोरम बनाउनका लागि, सुसंस्कृत बनाउनका लागि, असल मानिस बस्नलायक बनाउनका लागि भौतिक प्रगति मात्र होइन आत्मिक र आध्यात्मिक चेत जगाउने गरी समष्टिगत विकासको सोंचका साथ तपाईहरु अघि बढ्नोस् । यो कार्यक्रम भव्य रुपमा आयोजना गर्नुभएकोमा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सहित सहभागि सवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिंदै, नगरपालिकाले उत्तरोत्तर प्रगति गरोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै, म आफ्नो भनाइ यहिं टुग्याउँछु हवस् त धन्यवाद । नमस्कार ।
बेलायतमा रहेर सामाजिक जीवनका महत्वपूर्ण भूमिकामा रहनुभएका नेपाली समुदायसॅग जुम मार्फत छलफल
१५ जेष्ठ, २०७७,
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल
२०७७ वैशाख २९ गते, सि‌ंहदरवार